सामाजिक सञ्जालहरुमा लाईक र सेयर गर्दा आउने K र K+ को अर्थ के हो ?
सामाजिक सञ्जालहरुमा आउने K र K+ को अर्थ के हो ?
जनवरी 8, 2017 सेप्टेम्बर 25, 2017 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments लाईक, सामाजिक सञ्जाल, सेयर
सामाजिक सञ्जालहरुमा आउने K र K+ को अर्थ के हो ? प्राय: अचेल सामाजिक सञ्जालहरुको लाईक र सेयर बटनमा अंग्रेजीमा K र ‘K+ लेखिएको देखिन्छ । बिज्ञानका पाठकलाई त यो कुराको ज्ञान हुन्छ तर अन्य बिषयका पाठकलाई यो कुराको ज्ञान नहुन सक्छ ।
वास्तवमा किलो (Kilo) शब्दको अर्थ १० ३= १,००० अथवा १ हजार हुन्छ । त्यसकारण K हजारका लागि लेखिन्छ भने जव हजार कटेर अर्को हजार नथपिएसम्म K+(के प्लस) लेखिन्छ । किलो (Kilo) शब्दको उत्पत्ति ग्रीक भाषाको Khilioo बाट भएको हो । जसको अर्थ एक हजार हुन्छ । ग्रीक भाषामा मास (Mass) को एक हजारलाई युनिटलाई एक किलोग्राम भनिन्छ । त्यसैले
१ किलोग्राम = १,००० ग्राम
१ किलोमिटर = १,००० मिटर
← राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को हुनुपर्छ ?
जीवनमा नीतिधर्मको आवश्यकता →
डिसेम्बर 10, 2016 साइन्स इन्फोटेक 2
मार्च 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0